Azụ maka ụmụ ruo 1 afọ
Azụ bụ ngwaahịa protein bara uru nke nwere ihe amino acid niile dị mkpa maka ahụ nwatakịrị ahụ, ihe mgbagwoju vitamin pụrụ iche (F, A, D, E) tinyere mmanụ na mineral bara uru dị mkpa maka metabolism nke ọma (iodine, manganese, zinc, copper, boron, ígwè, fluorine, wdg).
Maka ụmụaka ruo otu afọ, azụ ndị dị ala-hake, cod, pich perch, pollock, makrus, na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ, pike, ọkpụkpụ, catfish, azụ azụ Baltic, wdg, ga-eme.
Kedu mgbe m nwere ike ịmalite inye nwa a azụ?
Mee ka azụ banye n'ime nri ụmụaka, dịka ndị ọkachamara si kwuo, enweghị ike ịmalite ọnwa 9-10. Mee nke a nanị mgbe nwa ọhụrụ ahụchara anụ anụ. Cheta na azụ bụ ike allergen, ọ dị mkpa ka ị jiri ya kpachapụ anya. Amalite nri kwesịrị site na 5-10 grams kwa ụbọchị. Na-ekiri mmeghachi omume nke ahụ nwa ahụ, jiri nwayọọ nwayọọ na-amụba ọgwụ ahụ. Onu ogugu ogugu kwa ubochi nke umu ogugu nke otu nwa afo iri bu gram 70. A na-atụ aro nwa dị mma ka ọ ghara inye ya karịa ugboro abụọ n'izu. Kesaa "azụ" na "anụ" ụbọchị, dịka ị na-ewere abụọ n'ime ngwaahịa ndị a n'otu oge n'ụbọchị ga-eme ka ibu ka ukwuu na usoro nsị nke nwa. Enyeghi umu ozo ka o buru umuaka di afo ato adighi akwado ha, n'ihi na ha adighi uru na ihe ndi ozo emerutara n'oge nri.
Dị ka ọ na-achị, nrịanrịa nke nwatakịrị nwere ike ịbụ maka azụ ahụ dum, na-enweghị otu, na ụfọdụ nke ụdị ya. Na nrịbama mbụ nke diathesis, nwatakịrị ahụ kwesịrị iwepụ izu abụọ n'izu, na-ekpochapụ efere azụ site na nri. Mgbe ngosipụta nke ọrịa ahụ ji nwayọọ nwayọọ kwụsị, gbalịa ịbanye n'ime ụdị ụdị azụ ọzọ. Mee nke a n'otu oge ahụ, nke nta nke nta, malite na 5-10 grams kwa ụbọchị. Ọbụna na enweghi mmeghachi omume na-enweghị nhịahụ, emefula na ọnụego oriri a na-atụ aro kwa ụbọchị.
Esi esi esi nri maka nwa?
Debe azụ na mmiri salted.
Ọ dị ezigbo mkpa iji nlezianya kpochapụ ma wepu ọkpụkpụ niile, ọbụlagodi na ịzụta fillet na-eme nke ọma.
E kwesịrị ịkụ azụ azụ ma ọ bụ sie ya obere mmiri
Brew fish should be 10-15 nkeji, ma ọ bụrụ na iberibe dị obere na 20-25 nkeji, ọ bụrụ na a na-esi azụ ya.
Ntụziaka dị mfe na bara uru maka efere azụ maka ụmụaka dị otu afọ
Azu puree. Ejiri anụ a na-agbanye nri (100 g) esi nri ruo mgbe ị kwadebere ma gwuo ya. Tinye mmiri ara (1 tsp) na mmanụ ihe oriri (1 tsp) na mix. Ihe na-esi na ya pụta maka nkeji ole na ole.
Azụ anụ. Site na sie poteto (1 pc.), Mmiri ara ehi (2-3 tablespoons)
na mmanụ ihe oriri (2 tsp) anyị na-eme a mash. Gbakwunye azụ fillet (100 g) dị njikere, kpochaa ya, ma tie akwa ya na akwa (½ pcs.) Gwakọta ihe niile ma tinye ya na ebu. Anyị na-esi nri maka di na nwunye ma ọ bụ saa mmiri maka minit 30.
Azụ meatballs. Azụ fillet (60 g) ma tinye achịcha ọcha (10 g), igwu n'ime anụ grinder ugboro 2-3, tinye akwa nkochi ime akwa (1/4 pcs.), Nnu, mmanụ ihe oriri (1 tsp) ma jikọta nke ọma. Anyị na-etolite obere bọọlụ site na nchịkọta ahụ, juju ha na mmiri (ruo ọkara) ma kpoo ihe dị ka nkeji iri atọ. na obere ọkụ.
Mgbe otu afọ gasịrị, a ga-enye nwa ahụ ụdị nri dị iche iche nke azụ.
Nri nke nwa na ọnwa 11
Nlekọta ụmụ amụrụ ọhụrụ
Mgbaghara n'ime nwa - ọnwa 2
Kedu ihe nwatakịrị ga - enwe ike ime n'ime ọnwa 11?
Baptizim nke nwatakiri - gịnị ka ị chọrọ ịma gbasara nne gị?
Mmiri ara ehi na mmiri ara ehi maka ụmụ ọhụrụ
Mkpụrụ ihu na ihu nwa ahụ
Ọmolysing colibacin na ụmụ ọhụrụ
Kedu mgbe ụmụaka na-etolite?
Nwa 11 ọnwa - mmepe na ihe oriri
Mmadụ ole na-agwọkwa otu mkpụrụ nke nwa amụrụ ọhụrụ?
Mmadụ ole ka ha ga-eso nwa ọhụrụ a?
Dowry maka nwa amụrụ ọhụrụ na oyi
Epeepe maka ụmụ nwanyị na abụba
Mgbaghara - mgbaàmà
Mwepu nchekwa maka ụlọ
Otu ụdị penguins na-eme ememe Ụbọchị Valentine na ụlọ oriri na ọṅụṅụ!
Di na-agbanwe, ma anaghị ahapụ - ndụmọdụ nke ọkà n'akparamàgwà mmadụ
Ịkụ ụda ụmụaka n'oge okpomọkụ
Akpa na mkpuchi
Ọgwụgwọ nke influenza n'ime ụmụaka
Daniel Craig na Rachel Weiss
Gịnị mere nrọ nke ụda ọlaọcha?
Ụzọ nke ịzụ sneakers
Mmiri ọkụ eletrik
Ero ofe si birch ogbugbo - uzommeputa
Vietnam bụ oge ezumike
Riz maka ọnwụ
Ngwurugwu - ọgwụ ọgwụ na contraindications
Obi cheese casserole na-enweghị manga